Muva nje, umuntu Soviet ufuna ukuya ebhishi nudist. Ngokusho abazana naye ngiyazi ukuthi uwoyela baba emehlweni abo ngesikathi bacabangani ngawo, "abode okuphambene." Manje yimuphi umuntu ucishe abacebile kalula ufika engcono nudist amabhishi emhlabeni. Pho kunani lokho? It kuvela ukuthi lezi amabhishi awuphethe lutho lokukha okuphambene, ukuvusela abanye imizwa yothando kanye nezinye, izinjabulo cishe sinqatshiwe. Abantu abaningi abavakashela ebhishi nudist (Ngikhuluma ngani abantu bakwamanye amazwe), sikhathalela yokusesha adventure noma zamehlo risque.
Kunalokho, abantu beze lapha, ukushumayela Freie Korper Kultur, noma "khulula umzimba isiko". Ziyakwazi nqunu, hhayi ngoba ukhathazeke, futhi ngoba ufuna ukuba zemvelo. Yingakho kukhona imithetho eqinile ukuze balandele watusa ukuba zonke "beachgoers" ezinjalo ukuba angaweli esicuphweni isimo ezihlekisayo noma ezingathandeki
amabhishi nudist emhlabeni. imithetho yokuziphatha
Beaches kungenzeka agunyaza noma "zasendle." Ukuya lokuqala, qiniseka ukuthi kukhona uphawu «nudist / topless / khulula lolwandle» noma «FKK-Strand». Kungenjalo, ungakwazi sithathe amaphoyisa noma zendawo izakhamizi, buka ukhathale emizimbeni zíze futhi ngaso sonke isikhathi enhle, washaywa ngezinduku amatshe.
amabhishi nudist azihloselwe Ukuvusela. Ngakho-ke, kuvakashelwa indawo, ukuthatha yonke imizamo ilukuluku lakho futhi injabulo zazifihliwe ngokuphepha. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi amadoda, isithakazelo kabani kwabobulili obuhlukile nqunu ngokuvamile kubonakala hhayi kuphela emehlweni. By the way, izibuko ezimnyama futhi akazange aphikisane. Indlela engcono kakhulu ukuqhuba: weza ebhishi - afunde incwadi.
Akubalulekile ukuvumela izincomo ongamazi. Emazweni amaningi kubhekwa ukuhlukunyezwa, nokwephulwa kwamalungelo futhi eshushiswa.
Ungakhohlwa isikhumba elangeni. Yini ngokuvamile kufihlwe, kushe kalula.
Kwamanye amazwe, ubunqunu akuvunyelwe ngokomthetho. Ngakho, e Lae noma Saudi Arabia yobunqunu esidlangalaleni ungathola eminyakeni embalwa ejele. Ngakho, kwenzekani ukuze sunbathe, okokuqala thola ukuthi izwe basonta Nudism.
The best nudist amabhishi emhlabeni. Amazwibela
Bheka, ngisanda uhlu kahle hle ukuthi yiziphi emabhishi aziwona ithandwa kakhulu izivakashi zamazwe onke.
Eliseduze nudist beach "Dune" itholakala Petersburg. Kutholwe ku kokungathathi hlangothi phakathi Russia nase-Finland strip, uSathane wasungula baseMelika ikhathalogu best holiday izindawo ngoba nudists. amabhishi eziningana kukhona kulula ukubheka e Foros, Koktebel futhi Kazantip.
Kakhulu amahle exotically lolwandle Hawksbill Bay isendaweni eziqhingini zaseCaribbean. ubunjalo Ezinhle nengqalasizinda esihle - izici zayo.
"Amalungelo Alinganayo Nokuhlonipha elangenza" yisiqubulo ngobukhulu French Cape d'Agde. Amancane ngosayizi, kodwa hhayi amabhishi okubi nudists e Cavalier futhi St Tropez.
I amahle kakhulu futhi kancane nudist kakhulu lolwandle (ngenhla) itholakala e-Hawaii (Maui Isiqhingi) futhi ibizwa ngokuthi i-Little Beach. Ukuze ufake nalutho, ebiyelwe off kusuka prying amehlo endaweni zasendle, kwalelidwala efanayo kuyodingeka ukunqoba. Ibhishi nudist olungekho emthethweni kodwa kukhona akekho oshayelayo.
Ngokwemvelo, lokhu kusho Ibiza has angaphezu kwelilodwa lolwandle ezinjalo. Iningi labo eSpain, eziqhingini Tenerife, Gran Canaria, Menorca. Ngakho abalandeli okuqhubekayo yilanga lapho, lapho iyophumula.
Abandoned Khatidze ehhotela esiqhingini. Japan, okuyinto thina namanje awazi
Konenkov Sergey Timofeevich: Biography, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu kanye nempilo yakho
Cyprus Amahhotela ngemindeni nezingane - Buyekeza bese Izincomo
Tigridia: ukutshala nokunakekela izimbali Aztec
Uhlelo Life nokuphathwa semininingwane
Temdzabu Russian: lycanthropy njengesibonelo we inkosazana-frog
Coding utshwala ekhaya
Weave "impungushe umsila", izinhlobo zayo kanye nezici